Shuruudaha adeegga - Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt Shuruudaha adeegga - Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt
Shuruudaha iyo Shuruudaha Iibsiga ee Khadka Tooska ah
Ereybixinta soo socota ayaa lagu dabaqayaa Shuruudahaan iyo Shuruudaha, Bayaanka Asturnaanta iyo Ogeysiiska Diidmada iyo wixii ama dhammaan heshiisyada: "Macmiil", "Adiga" iyo "Taada" ayaa loola jeedaa adiga, qofka galaya degelkan oo aqbalaya shuruudaha iyo shuruudaha Shirkadda. "Shirkadda", "nafteena", "Anaga" iyo "Annaga", waxaa loola jeedaa Shirkadeena. "Xisbi", "Xisbiyo", ama "Annaga", waxaa loola jeedaa macmiilka iyo nafteenaba, ama macmiilka ama nafteenaba. Dhammaan shuruudaha waxay tixraacayaan soo-jeedinta, aqbalaadda iyo tixgelinta bixinta lacag-bixinta ee daruuriga u ah qaadashada nidaamka kaalmadeena macmiilka sida ugu habboon, ha ahaato shirarka rasmiga ah ee muddada cayiman, ama qaab kasta oo kale, ujeeddo cad oo ah la kulanka Baahida macmiilka ee la xariirta bixinta adeegyada / alaabada la sheegay ee Shirkadda, iyadoo la raacayo laguna dhaqmayo, Sharciga Ingiriiska ee jira. Isticmaal kasta oo eraybixinta kor ku xusan ama ereyo kale oo keli ah, jamac, xarfo weyn iyo / ama isagu / iyadu ama iyadu, waxaa loo qaadaa inay yihiin kuwo la isku beddeli karo sidaa darteedna loola jeedo isku mid.
Ka-reebitaanka iyo Xaddidaadaha
Macluumaadka ku yaal degelkan waxaa lagu bixiyaa qaab "as is" ah. Ilaa inta ugu buuxda ee sharcigu oggol yahay, Shirkaddan:
wuxuu ka reebayaa dhammaan wakiiladda iyo damaanadaha la xiriira degelkan iyo waxyaabaha ku jira ama kaas oo ay bixin karaan ama gacan ka geysan karaan cidii kale oo gacansaar la leh ama dhinac saddexaad oo kale, oo ay ku jiraan wixii la xiriira wixii khaldan ama ka gaabis ah ee ku jira degelkan iyo / ama suugaanta Shirkadda; iyo
waxay ka reebban tahay dhammaan mas'uuliyadaha waxyeelada ka dhalanaysa ama la xiriirta adeegsiga degelkan. Tan waxaa ka mid ah, iyada oo aan la xadidin, khasaaro toos ah, luminta ganacsiga ama macaashka (haddii khasaarihii macaashkaasi uu ahaa mid horay loo sii sheegay iyo in kale, oo ku soo kordhay howlihii caadiga ahaa ama aad kula talisay Shirkaddan suurtagalnimada khasaaraha noocan oo kale ah), waxyeelada ay keentay kumbuyuutarkaaga, softiweerka kombiyuutarka, nidaamyada iyo barnaamijyada iyo xogta ku dul taal ama wixii kale ee toos ama aan toos ahayn, waxyeelo u timaadda iyo shilalba.
Shirkadani si kastaba ha noqotee kama reebayso mas'uuliyadda dhimashada ama dhaawaca shaqsiyeed ee ka dhashay dayacaadkeeda. Ka-reebitaannada iyo xaddidaadaha kor ku xusan waxay khuseeyaan oo keliya inta sharcigu oggol yahay. Midkoodna xuquuqdaada sharci ahaan macaamil ahaan ma saameyn.
Waxyaabaha Custom / Monogram gaar ah waa aan la soo celin karin. Ma ogolaan karno in shay la joojiyo, maadaama alaabada oo dhan la dalbado. Waxaan haysannaa waqti iyo ilo horeyba loogu qoondeeyay in aan shey ka shaqeyno laga bilaabo waqtiga amarka la bixiyo.
Waxyaabaha (Customer-ka) aan Customized-ka ahayn iyo Waxyaabaha keydka ah waxay ku xiran yihiin ujrad 15% ah haddii la joojiyo dalabka tirtiridda wax ka badan 24 saacadood ka dib iibsiga.
Amarada qaar ayaa laga yaabaa inay soo raraan wax ka yar 24 saacadood, haddii amarkaaga horay loogu sii raray shixnad dambe uma awoodno inaan joojino dalabkaaga.
Waxyaabaha xayeysiinta iyo iibka ah lama burin karo lamana soo celin karo.
Qiimo dhimista iyo Kaararka Hadiyada:
Si loo tixgeliyo inay ansax yihiin, kaararka hadiyadaha iyo lambarrada qiimo dhimista waa in lagu dabaqaa iibsashada si loo helo qiimahooda la sheegay. Haddii nambarka sicir-dhimista aan lagu dabaqin amarkaaga shaashadda jeegga, shirkaddu ma soo saari doonto lacag-celin si ay dib ugula shaqeyso kaarka hadiyadda ama nambarka sicir-dhimista. Haddii aad dhibaato ku qabtid adeegsiga nambarkaaga dhimista, fadlan nala soo xiriir kahor intaanad ka shaqeynin bixintaada. Shirkaddu waxay ku soo saari kartaa amaahda dukaanka hadba sida ay u rabto. Koodhadhka Kaararka Hadiyada iyo lambarrada dhimista looma adeegsan karo iskudhaf midba midka kale ama dalabyada kale ee jira.
Shirkaddu waxay xaq u leedahay inay bedesho shuruudahaan waqti ka waqti sida ay u aragto inay ku habboon tahay iyo sii wadidaada isticmaalka goobta waxay muujineysaa aqbalidaada wixii sixid ah ee shuruudahaan. Haddii ay jiraan wax isbeddelo ah oo ku saabsan siyaasadeena asturnaanta, waxaan ku dhawaaqi doonnaa in isbeddeladan lagu sameeyay boggayaga hore iyo bogagga kale ee muhiimka ah ee ku yaal boggayaga. Haddii ay jiraan wax isbeddelo ah oo ku saabsan sida aan u adeegsanno Macluumaadka Shakhsi ahaan Lagu Aqoonsan karo ee macaamiishayada, ogeysiis ahaan emayl ama boosta ayaa loo samayn doonaa kuwa ay saameeyeen isbeddelkan. Wixii isbeddel ah ee ku yimaada siyaasadeena asturnaanta waxaa lagu dhajin doonaa degelkeenna 30 maalmood ka hor isbeddelladan dhacaya. Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad dib u aqriso bayaanka si joogto ah
Shuruudahaan iyo shuruudahaani waxay ka mid yihiin heshiiska u dhexeeya Macaamilka iyo nafteena. Helitaanka degelkan iyo / ama qaadashada ballan ama Heshiis waxay muujineysaa fahamkaaga, heshiiskaaga iyo aqbalaadda, ee Ogeysiiska Diidmada iyo Shuruudaha iyo Xaaladaha buuxa ee halkan ku jira. Xuquuqdaada Macaamiil ee sharciga ah saameyn kuma yeelan.
SHAQAALAHA BARNAAMIJKA SUUQA SOO SAARKA SMS / MMS MOBILE
AllSCinc. (hada kadib, "Anaga," Anaga, "" Kuweena)) waxay bixinayaan barnaamij fariin moobil ah ("Barnaamijka"), oo aad ogolaatay inaad isticmaasho oo aad kaqeybqaadato iyadoo la raacayo Shuruudahaan iyo Shuruudaha iyo Nidaamka Asturnaanta ee Dhambaalka Mobiilka (" Heshiis ”). Markaad doorato ama aad kaqaybqaadato mid kamid ah Barnaamijyadeena, waxaad aqbashaa oo aad ogolaataa shuruudahan iyo shuruudahan, oo ay kujiraan, xad la'aan, heshiiskaaga inaad ku xalliso wixii khilaafaad ah ee nalagala dhex maro adoo adeegsanaya, shaqsi keli ah, sida ku faahfaahsan "Xallinta Khilaafaadka ”Qaybta hoose. Heshiiskani wuxuu ku eg yahay Barnaamijka mana loogu tala galay inuu wax ka beddelo Shuruudaha iyo Shuruudaha kale ama Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee lagu xukumi karo xiriirka ka dhexeeya adiga iyo annaga xaaladaha kale.
Isticmaalka Isticmaalaha: Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa Isticmaalayaasha inay helaan farriimaha moobiilka ee SMS / MMS iyagoo si xaqiiqa ah u doorta Barnaamijka, sida iyada oo loo marayo foomamka diiwaangelinta ee ku saleysan internetka ama arjiga. Iyadoo aan loo eegin habka ikhtiyaariga ah ee aad uga faa'iideysatay ku biirista Barnaamijka, waad ku raacsan tahay in heshiiskan uu khuseeyo kaqeybgalkaaga Barnaamijka. Markaad kaqeyb gasho Barnaamijka, waxaad ogolaatay inaad heshid farriimaha mobilada ee otomaatigga ah ama horay loo sii qorsheeyay ee lambarka taleefanka ee laxiriirta ikhtiyaarkaaga, waxaadna fahantay in oggolaanshaha aan looga baahnayn inaad wax iibsi ah naga hesho. Intaad oggoshahay inaad hesho farriimaha laguu soo diray adoo adeegsanaya autodialer, waxa kor ku xusan looma fasiran doono inay soo jeediyaan ama tilmaamaan in dhammaan ama dhammaan farriimaheena moobiillada ah lagu diro iyadoo la adeegsanayo nidaamka wicitaanka taleefanka otomaatiga ah ("ATDS" ama "autodialer"). Qiimaha farriinta iyo xogta ayaa la codsan karaa.
Ka-noqoshada Isticmaalaha: Haddii aadan rabin inaad sii wadato kaqeybqaadashada Barnaamijka ama aadan mar dambe oggolaan Heshiiskan, waxaad ogolaatay inaad ka jawaabto JOOJI, DHAMMAAD, JAWAAB, UNSUBSCRIBE, ama QUIT fariin kasta oo moobiil ah oo naga timaadda si aad uga baxdo Barnaamijka. Waxaad heli kartaa fariin moobil oo dheeri ah oo kuu xaqiijineysa go’aankaaga inaad ka baxdo. Waad fahantay oo aad ogolaatay in xulashooyinka kor lagu soo sheegay ay yihiin hababka kaliya ee macquul ah ee looga baxo. Waxaad sidoo kale fahantay oo aad ogolaatay in qaab kasta oo kale oo looga baxo, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, farriinta qoraalka ereyada aan ahayn kuwa kor ku xusan ama hadal ahaan aad ku weydiisato mid ka mid ah shaqaalaheenna inuu kaa saaro liiskayaga, aysan ahayn hab macquul ah oo looga baxo .
Waajibaadka Ogeysiinta iyo Kireynta: Haddii wakhti kasta oo aad damacsan tahay inaad joojiso adeegsiga lambarka taleefanka gacanta ee loo isticmaalay in lagu qoro Barnaamijka, oo ay ka mid tahay joojinta qorshahaaga adeegga ama iibinta ama u wareejinta lambarka taleefanka koox kale, waxaad ku raacsan tahay inaad dhammaystiri doontid nidaamka Bixitaanka Isticmaalaha kor ku xusan ka hor intaadan joojin isticmaalka lambarka taleefanka gacanta. Waad fahantay oo aad ogolaatay in heshiiskaaga inaad sidaa yeelatid uu yahay qayb ka mid ah qodobadan shuruudahan. Waad sii raacsan tahay taas, iHaddii aad joojiso adeegsiga lambarka taleefankaaga gacanta adigoon nagu soo wargelin is-beddelkan, waxaad oggoshahay inaad adigu masuul ka noqon doontid dhammaan kharashyada (oo ay ku jiraan khidmadaha qareennada) iyo deymaha naga soo gala annaga, ama koox kasta oo gacan ka geysata bixinta moobilka. farriimaha, taasoo ka dhalatay sheegashooyinka ay keeneen shakhsiyaad (yada) kuwaas oo markii dambe loo qoro lambarka taleefanka gacanta. Waajibaadkaan iyo heshiiskani waxay ka badbaadi doonaan joojinta ama joojinta heshiiskaaga inaad kaqeybqaadato mid ka mid ah Barnaamijyadeena.
WAAD KU HESHIISEY IN AAD CADDAYN DOONTO, OO AAD NAGU QAADATO DHIBAATOOYIN KASTA OO LAGU SHEEGO AMA LACAG LA'AANTA OO KA TIRSAN FASHILKAAGA SI AAD UGU SOO BADASHO ISBEDELKA MACLUUMAADKA AAD SIISAY, OO AY KU JIRTO EEDAYN KASTA OO LAGU XIRIIRO IYO TILMAAMKA § 47, et seq., AMA SHAQO GOBOLEEDKA IYO SHARCIYADA FEDERAALKA, IYO SHARCIYOOYIN KASTA OO LOOGU TALAGALAY IN AY KA SOO BAXAYAAN ISKU DAYASHADA LAGU SOO XIRIIRO LAMBARKA TELEFOONKA MAGAALADA AAD BIXISAY.
Sharaxaadda Barnaamijka: Iyadoo aan la xadidaynin baaxadda Barnaamijka, dadka isticmaala ee doorta Barnaamijka waxay filan karaan inay helaan farriimo ku saabsan suuqgeynta iyo iibinta waxyaabaha Qurxinta Guriga oo ay ku jiraan, Birta, Cawrada, iyo Shumaca.
Qiimaha iyo Joogtaynta: Qiimaha farriinta iyo xogta ayaa la codsan karaa. Barnaamijku wuxuu ku lug leeyahay farriimaha soo noqnoqda ee moobiilka, iyo fariimo dheeri ah oo dheeri ah ayaa loo diri karaa xilliyo ku saleysan isdhexgalkaaga annaga.
Tilmaamaha Taageerada: Wixii taageero ah ee la xiriira Barnaamijka, u qor “HELP” lambarka aad ka heshay farriimaha ama email noogu soo dir Support@schmidtchristmasmarket.com. Fadlan la soco in adeegsiga cinwaanka iimaylku aanu ahayn hab la aqbali karo oo lagaga baxo barnaamijka. Bixitaanka waa in lagu soo gudbiyaa iyadoo la raacayo habraacyada kor lagu soo sheegay.
Bixinta MMS: Barnaamijku wuxuu soo diri doonaa SMS TM-yada (joojinta farriimaha) haddii qalabkaaga moobiilku uusan taageerin farriinta MMS.
Diidmadayaga Dammaanadda: Barnaamijka waxaa lagu bixiyaa qaab "as-as" waxaana laga yaabaa inaan laga helin dhammaan meelaha markasta lagamana yaabo inuu sii wado inuu shaqeeyo haddii ay dhacdo badeecad, softiweer, caymis ama isbeddelo kale oo uu ku sameeyo shirkaddaada wireless. Masuul kama noqon doono dib u dhac kasta ama dib u dhac ku yimaada helitaanka fariimaha moobiilka ee kuxiran Barnaamijkaan. Bixinta farriimaha moobiilka waxay ku xiran tahay gudbinta wax ku oolka ah ee bixiyaha adeeggaaga wireless / hawlwadeenka shabakadda waana ka baxsan koontaroolkeena. T-Mobile mas'uul kama aha dib-u-dhaca ama fariimaha moobiilka ee aan la keenin.
Shuruudaha Ka-qaybgalaha: Waa inaad haysataa qalab wireless ah oo adiga kuu gaar ah, oo awood u leh fariin laba-geesood ah, inaad isticmaaleyso wadaha wireless-ka qayb qaadanaya, iyo inaad ka mid noqoto macaamiisha adeegga wireless-ka oo leh adeegga farriinta qoraalka. Dhammaan bixiyeyaasha taleefannada gacanta ma wada qaataan adeegga lagama maarmaanka u ah kaqeybgalka. Hubi awooda taleefankaaga tilmaamo fariin gaar ah oo fariin ah.
Xaddidaadda Da'da: Uma isticmaali kartid inaad ku lug yeelatid Platform-ka haddii aad ka yar tahay saddex iyo toban (13) sano jir. Haddii aad isticmaaleyso ama aad ku howlan tahay Barnaamijka oo aad u dhexeyso da'da saddex iyo toban (13) iyo siddeed iyo toban (18) sano, waa inaad haysataa ogolaanshaha waalidkaa ama mas'uulkaaga sharciga ah inuu sidaas sameeyo. Adiga oo adeegsanaya ama ku hawlan Platform-ka, waxaad qireysaa oo aad ogolaatay inaadan ka yareyn da'da seddex iyo toban (13) sano, aadna u dhexeyso da'da saddex iyo toban (13) iyo siddeed iyo toban (18) waxaadna haysataa ogolaanshaha waalidkaaga ama ilaaliyahaaga sharciga ah inaad isticmaasho ama aad ku lug yeelatid barnaamijka, ama aad tahay qof weyn oo ku jira xukunkaaga. Adoo adeegsanaya ama ku hawlan Platform-ka, waxaad sidoo kale qireysaa oo aad ku raacsan tahay in laguu oggol yahay sharcigaaga ku-habboon ee aad ku adeegsan karto iyo / ama aad ku dhexgeli karto Barxadda.
Mawduuc mamnuuca ah: Waad qiraysaa oo aad oggoshahay inaadan u dirin waxyaabaha ka mamnuuca ah bogga. Waxyaabaha la mamnuucay waxaa ka mid ah:
- Khiyaano kasta, fadeexad, sumcad dilid, fadeexad, hanjabaad, dhibaateyn, ama dabagalin waxqabad;
- Waxyaabaha la diidi karo, oo ay ka mid yihiin cay, fisqi, edebdarro, rabshad, cuqdad, nacayb, iyo takoorid ku saleysan isir, jinsi, diin, dhalasho, naafonimo, ujeedo jinsi, ama da ';
- Barnaamijyada kombiyuutarka ee burcad-badeedda laga qaado, fayrasyada, dixirigga, fardaha Trojan, ama lambar kale oo waxyeello leh;
- Shey kasta, adeeg, ama dallacsiin kasta oo sharci darro ah halka alaabta, adeegga, ama kor u qaadideeda laga helo;
- Nuxur kasta oo ku lug leh iyo / ama tixraac macluumaad caafimaad shakhsi ahaaneed oo ay ilaalineyso Xeerka La Xisaabtanka Caafimaadka iyo La Xisaabtanka ("HIPAA") ama Teknolojiyada Macluumaadka Caafimaadka ee Dhaqaalaha iyo Caafimaadka Caafimaadka ("HITEC"); iyo
- Wax kasta oo kale oo ka mid ah oo mamnuucaya Sharciga Lagu Haboon karo ee ku yaal xukunka laga soo diray farriinta.
Xalinta Khilaafaadka: Haddii ay dhacdo inuu jiro khilaaf, sheegasho, ama muran idinka iyo Adiga, ama u dhexeeya adiga iyo Stodge, LLC d / b / Postcript ama adeeg bixiye kale oo dhinac saddexaad ah oo matalaya Anaga oo metelayna si aan ugu gudbinno farriimaha moobiilka gudahooda baaxadda barnaamijka, oo ka dhasha ama la xiriirta sheegashooyinka sharciyeed ee federaalka ama gobolka, sheegashooyinka sharciga guud, Heshiiskan, ama jebinta, joojinta, fulinta, fasiraadda ama ansaxnimadeeda, oo ay ku jirto go'aaminta baaxadda ama ku habboonaanta heshiiskan in loo kala gar qaado , muranka noocaas ah, sheegashada, ama muranku wuxuu noqon doonaa, illaa inta ugu buuxda ee sharcigu oggol yahay, oo lagu go'aaminayo heshiisiinta Tanner, Alabama ka hor hal garqaade.
Dhinacyadu waxay ku heshiiyeen inay u soo gudbiyaan muranka ku xirnaanshaha heshiisiinta iyadoo la raacayo Xeerarka Xalinta Khilaafaadka Ganacsiga ee Ururka Xalinta Khilaafaadka Mareykanka ("AAA") ka dibna dhaqan gala. Marka laga reebo sida kale ee halkan ku xusan, garqaadaha ayaa fulin doona sharciyada muhiimka ah ee Qaybta Garsoorka ee Federaalka oo ay ku taal schmidt Mabaadii'da Suuqa Kirismaska ​​ee meheradda, iyada oo aan loo eegin khilaafkeeda xeerarka sharciyada. Toban (10) maalmood gudahood ka dib marka dalabka heshiisiinta loo gudbiyo dhinac, dhinacyadu waa inay si wada jir ah u doortaan garqaade ugu yaraan shan sano oo khibrad ah u leh awooddaas oo leh aqoon iyo khibrad u leh mawduuca khilaafka. Haddii dhinacyadu ku heshiin waayaan garqaade toban (10) maalmood gudahood, koox ayaa ka codsan karta AAA inay magacaawdo garqaade, kaasoo ay tahay inuu qanciyo isla khibraddii loo baahnaa. Haddii khilaaf yimaado, garqaadaha ayaa go'aan ka gaaraya dhaqan gelinta iyo tarjumaadda heshiiskan heshiisiin iyadoo la raacayo sharciga Xalinta Khilaafaadka Federaalka (“FAA”). Dhinacyadu waxay sidoo kale isku raaceen in sharciyada AAA ee xukuma Tallaabooyinka Degdegga ah ee Ilaalinta ay ku dabaqi doonaan beddelkii ay maxkamadda ka raadin lahaayeen gargaarka amarka degdegga ah. Go'aanka garqaadaha ayaa noqonaya mid kama dambeys ah oo qasab ah, cidna ma yeelan doonto xuquuqda rafcaanka marka laga reebo kuwa lagu sheegay qeybta 10 ee FAA. Dhinac kasta wuxuu qaadayaa qaybtiisa khidmadaha laga bixiyay gar-qaadaha iyo maamulka gar-qaadidda; si kastaba ha noqotee, garqaadaha ayaa awood u leh inuu ku amro hal dhinac inuu bixiyo dhammaan ama qayb kasta oo ka mid ah khidmadahaas oo qayb ka ah go'aan macquul ah. Dhinacyadu waxay ku heshiiyeen in garqaadaha uu awood u leeyahay inuu bixiyo khidmadaha qareennada oo keliya illaa xadka si cad loogu oggolaado qaynuun ama qandaraas. Garqaaduhu awood uma lahan inuu bixiyo ciqaabta ciqaabta iyadoo qolo walibana ay ka dhaafeyso wixii xaq ah ee ay ku raadineyso ama ku soo ceshaneyso ciqaab ciqaabeed oo la xiriirta khilaaf kasta oo lagu xaliyo gar qaadista. Dhinacyadu waxay ku heshiiyeen inay u garnaqsadaan oo keliya shaqsi ahaaneed, heshiiskanna ma oggola in loo kala gar qaado fasalka ama sheegashooyin kasta oo loo keeno dacwoodaha ama xubin ka tirsan fasalka nooc kasta oo dacwadeed ama wakiil wakiil ah ah. Marka laga reebo sida sharcigu u baahan yahay, xisbi iyo garqaade midna ma shaacin karo jiritaanka, waxa ku jira, ama natiijooyinka wax heshiisiin ah iyada oo aan oggolaansho qoraal oo qoraal ah oo labada dhinac ah laga helin, ilaa laga ilaaliyo ama la raadsado xuquuq sharci ah. Haddii erey kasta ama qodob ka mid ah Qeybtaan uu yahay mid aan ansax ahayn, sharci darro ah, ama aan la fulin karin awood kasta oo sharci ah, sida aan sax ahayn, sharci-darrada ah, ama dhaqan-gal la'aanta saameyn kuma yeelan doonto erey kale ama bixinta Qeybtaan ama ma burineyso ama waxay bixinaysaa eray bixin ama sharci aan awoodin meel kale. . Haddii sabab kasta ha noqotee muran ka yimaado maxkamadda halkii uu ka ahaan lahaa gar-qaadid, dhinacyadu waxay halkan uga tanaasulayaan wixii xuquuq ah ee xukun maxkamadeed. Qeybinta heshiisiinta ayaa ka badbaadi doonta wax kasta oo baajinta ama joojinta heshiiskaaga ah inaad kaqeybqaadato mid kamid ah Barnaamijyadeena.
Waxyaabo kala duwan: Waxaad damaanad qaadaysaa oo aad noo metelaysa inaad leedahay dhammaan xuquuqda lagama maarmaanka ah, awoodda, iyo awoodda aad kula heshiin karto Shuruudahaan oo aad ku fuliso waajibaadkaaga halkan, mana jiraan wax ku jira Heshiiskan ama fulinta waajibaadkaas oo kale ayaa kugu ridi doona jabinta qandaraas kasta oo kale. ama waajib. Ku guuldareysiga labada dhinac inay ku dhaqmaan si kasta oo xuquuq kasta oo lagu bixiyay halkan looma arki doono inay ka tanaasushay wixii xuquuq dambe ah ee halkan ku saabsan. Haddii qodob kasta oo ka mid ah heshiiskan loo arko inuu yahay mid aan la fulin karin ama aan ansax ahayn, qodobkaasi wuu xadidnaan doonaa ama waa laga takhalusi doonaa inta ugu yar ee lagama maarmaanka ah si Heshiiskan haddii kale uu u sii ahaado mid si buuxda u dhaqan gala una dhaqan gala. Astaamo kasta oo cusub, isbeddello, cusbooneysiin ama hagaajin ah ee Barnaamijka waa inay ku xiran yihiin Heshiiskan haddii aan si cad loogu sheegin si kale qoraal ahaan. Waxaan xaq u leenahay inaan beddelo Heshiiskan waqti ka waqti. Wixii cusbooneysiin ah ee heshiiskan waa lagu soo wargelin doonaa. Waxaad qiraysaa masuuliyadaada inaad dib u eegis ku sameyso Heshiiskan waqti ka waqti iyo inaad ka feejignaato wixii isbeddelo ah. Adoo sii wadaya kaqaybqaadashada Barnaamijka wixii isbeddelo ah ee noocan ah ka dib, waxaad aqbashay Heshiiskan, sidii wax looga beddelay.